février 2018 · déliremadagascar
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny maha kandida azy amin’ny fifidianana filoham-pirenena taona 2018 i Mamy Raharimanana androany 28 febroary 2018. Hampandroso olona fa tsy vahoaka ity kandida natolotry ny antoko politika MAEVA na Madagasikara Endrika Vanona ity. Mifototra amin’ny fampivoarana ny olona tsirairay ny vinam-piarahamonina entiny raha tonga eo amin’ny fitondrana. Continuer la lecture →
Socio-eco	 28 février 2018 R Nirina
SALON DES ETUDES INTERNATIONAL : Hanampy ny mpianatra maniry hianatra any ivelany.
Fotoana ho an’ny mpianatra maniry hanohy fianarana ambaratonga ambony any ivelany ny « Salon des etudes international » karakarain’ny MADAJEUNE. Continuer la lecture →
Le gouvernement a finalement déposé les projets de loi relatifs aux élections présidentielles et autres scrutins auprès du Parlement. Le Premier ministre a beau expliqué pourquoi la mise en forme de ces projets de loi et leur dépôt auprès des institutions législatives ont pris beaucoup de temps, mais en vain. Continuer la lecture →
Socio-eco	 27 février 2018 R Nirina
FIGS : Ho mora ny fanohizana fianarana any Frantsa
Fianarana ambaratonga ambony 20 ao Frantsa miara-miasa akaiky amin’ny “groupe France International Graduate Schools” (FIGS). Continuer la lecture →
“MARCHÉ O’SOLDES”: Telo andro hanomanana ny paka
Lamaody hiaka farany ho an’ny lehilahy sy vehivavy ary ankizy hita mandritra ny hetsika “Marché O’soldes”. Manomboka ny 23 ka hatramin’ny 25 martsa 2018 eny Village Voara Andohatapenaka ity hetsika ara-barotra karakarain’ny “BCOM AND C” ity. Continuer la lecture →
politique	 26 février 2018 R Nirina
ARLETTE RAMAROSON : Horavana ny rafitry ny fanjanahan-tany
57 taona taorian’ny niverenan’ny fahaleovan-tena, tsy mbola nisy fampandrosoana teto Madagasikara. “Fanarenana no atao mialoha izay vao fampandrosoana”. Continuer la lecture →
Mpandraharaha avy any firenena enina tonga nanatrika ny fivoriana iraisam-pirenena faharoa ho an’ny fampiasam-bola stratejika any amin’ny faritra Avaratr’i Madagasikara (Conférence Internationale sur les investissements stratégiques du Nord de Madagascar ). Continuer la lecture →
Nitombo indray ny lazan’ny www.deliremadagascar.com. Lasan’ny mpanao gazety ato amin’ny www.deliremadagascar.com ny loka natokana ho an’ny “tanora mpanao gazety” tamin’ny fifaninana “ohatrinona ny teti-bolan’ny kaominina misy ahy? Ny Transparency International-Initiative Madagascar no nikarakara ity fifaninana andiany 2017 ity. Continuer la lecture →
Mpanao gazety Malagasy miisa roam-polo nahazo fiofanana momba ny “andraikitry ny mpanao gazety amin’ny sehatry ny toe-karena”. Ny fikambanan’ny fifankatiavan’ny Malagasy amin’ny firenena Sinoa no nanome ny fiofanana izay notontosaina omaly 22 febroary 2018. Continuer la lecture →
Socio-eco	 22 février 2018 R Nirina
KOLIKOLY ETO MADAGASIKARA: “Atsaharo ny tsy matimanota”
Very isa ny firenena Malagasy araka ny mari-pandrefesana ny kolikoly nataon’ny “Transparency International Initiative Madagascar” taona 2017. Raha 26 amin’ny zato ny salan’isa tamin’ny herintaona, nidina ho 24 izany. Mitana ny laharana faha-118 amin’ny firenena 176 hanjakan’ny kolikoly isika amin’izao fotoana izao. Continuer la lecture →